IKaizer Chiefs iqoke uMabedi njengomsizi kamqeqeshi | News24
Durban - IKaizer Chiefs isiqinisekise ukuqokwa kwalowo owayengumdlali nokaputeni waleli qembu uPatrick Mabedi njengomsizi kamqeqeshi.
UMabedi, odabuka kwelaseMalawi, wayedlalela amaKhosi phakathi kuka-1998 no-2006.
Lo msizi kamqeqeshi waba nesikhathi esihle kakhulu edlaleli abafana basePhefeni futhi wayekhona leli qembu liwola izindondo zePremiership ngesizini yango-2003/4 nangesizini ka-2004/5 futhi bathola neMandela Cup ngo-2001.
UMabedi waba ngukaputeni waleli qembu phakathi kuka-2003 kuya ku-2006 ngaphambi kokulishiya leli qembu wajoyina iMoroka Swallows.
OLUNYE UDABA:Kugwetshwe umdlali webhola ngokudlwengula unkosikazi wakhe
Ngokwesivumelwano sakhe naleli qembu, uMabedi usayine inkontileka ezoqala ngomhlaka-1 kuJulayi 2017.
“Ngiyajabula kakhulu ukubuya ekhaya. Ngilithakasele leli thuba lokuba yingxenye yethimba elizothuthukisa iChiefs futhi ngithanda nokubonga abaphathi bayo ngokunginika ithuba elihle kangaka,” kusho yena.
Ukufika kukaMabedi kulandela ukuthi iChiefs iqinisekisile ukuthi isinqamule inkontileka yobengumsizi kamqeqeshi wayo, uJohn Pantsil,
“IKaizer Chiefs kanye noJohn Pantsil sebefike esivumelwaneni sokunqamula inkontileka yakhe njengomsizi kamqeqeshi wekilabhu okuqale ngomhlaka-6 Juni 2017,” sifundeka kanjalo isitatimende kwi-website yaleli qembu.